मेजर शान्त पुन नयाँ वर्ष २०१८ मा बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयद्वारा Member of British Empire (MBE) बाट विभूषित भए । संयुक्त अधिराज्य बेलायतको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत Military Academy Shrivenham निजामती सेवामा कार्यरत उनी पुन समाज युकेको संस्थापक अध्यक्ष तथा मगर संघ युके च्यारिटी कमिसनका संरक्षक पनि हुन् । उनै मेजर शान्त पुन MBEसँग चिम्खोले काइँलाले गरेको कुराकानी ।
बुवा इन्स्पेक्टर स्वर्गीय हेमबहादुर पुन र आमा स्वर्गीय शर्मादेवी पुनको कोखबाट काठमाडौंमा जन्मिएको हुँ । मेरो पुख्र्यौली घर म्याग्दी जिल्ला शिख, स्वातमा हो । भर्ती हुन अगाडि काठमाडौं त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत थिए । QG Signals मा सत्ताईस वर्षको जागिर गरेर हाल Defence Academy of the UK मा SO2 Cord Course Co-ordinator को अभिभारा लिई काम गर्दै आइरहेको छु । मेरो परिवारमा मेरो श्रीमती नन्दा पुन र दुई छोरा छन् ।
नयाँ वर्ष २०१८ को अवसरमा बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितियद्वारा मेम्बर अफ ब्रिटिस एम्पायर (MBE) बाट विभूषित हुनुभएको छ कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
म यो पदकबाट विभूषित हुनेछु भन्ने सपनामा पनि कल्पना गरेको थिएन । आश्चर्यपूर्ण विभूषित हुँदा म एकदमै हर्षले गद्गद् भइरहेको छु । र, यसमा मेरो खुसीको सिमाना नै छैन ।
बहालवाला सेनामा रहँदा मान पदवी तथा मेडल पाउने धेरे संभावना तथा मौकाहरु हुन्छन् । तर, तपाई सेनाबाट निवृत्त भइसकेको व्यक्ति निजामती सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ एमबीईबाट विभूषित हुनचाहिँ कसरी सम्भव भए जस्तो लाग्छ ?
सायद मैले आफ्नो कामप्रति निर्वाह गरेको जिम्मेवारी, लगनशील, परिश्रम, विश्वास र इमान्दारिताको कदर गरेर विभुषित गरेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी, लगाव, परिश्रम, विश्वास र इमानदारिता सधैं कायम गरेर अघि बढ्दै जानुपर्दछ ।
तपाई कार्यरत Defence Academy Shrivenham मा आफ्नो जिम्मेवारीबारे केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
म हाल Defence Academy of the UK मा SO2 Cord Course Co-ordinator को कार्यभार सम्हाल्दै आइरहेको छु । यस ठाउँमा वर्षमा ४५० जति अफिसर्स स्टुडेन्टस्लाई तालिम दिइन्छ । यसै तालिमअन्तर्गत मेरो जिम्मेवारी चाँहि डेल्ली ट्रेनिङ प्रोग्राम तयार गरेर ब्रिटिस र Royal Marine को अफिसर्स स्टुडेन्टस्लाई वितरण गर्नु हो । यसै ट्रेनिङ प्रोग्रामको आधारमा उहाँहरुको तीस हप्तासम्म तालिम गर्नुहुन्छ ।
मेजर शान्त पुन को हो जस्तो लाग्छ ?
म केवल एउटा साधारण व्यक्ति हुँ । तर, पारिभाषिक रुपमा भन्नु चाहँदा म एक परिश्रमी, समाजसेवी, सत्य बोल्न नहिच्किचाउने र सबैको भलो चाहने व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्दछ ।
तपाई कुन कुन सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुनुहुन्छ ? सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुने कोबाट प्रेरणा पाउनु भयो र किन यसरी सामाजिक संस्थाहरुमा लाग्नु भयो ?
मेरो बुवा पनि एक प्रतिष्ठित समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो र म उहाँबाट नै प्रेरित भएको हुँ भन्न मन लाग्छ । हाल म मगर संघ युके, पुन समाज युके, नेपाली समाज स्वीन्डन (Wiltshire) / Ex-Gurkha Club Swindon मा आवद्ध छु । यी सामाजिक संस्थाहरुमा लाग्नुको खास कारण त केही छैन । आफ्नो अनुभव, विचार र सरसल्लाहबाट समाजलाई मद्दत पुग्छ कि भन्ने हेतुले लागेको हुँ ।
मगर संघ युकेको जस्तो अत्यन्तै शक्तिशाली संस्था स्थापित हुँदाहुँदै पनि पुन समाज युके खोल्नुको उद्देश्य बताइदिनु सक्नु हुन्छ कि ?
पुन समाज युके एक गाउँले तथा पारिवारिक समाज हो । पुन समाज युकेको कुनै पनि पारिवारिक सदस्यहरुलाई दुःख पर्दा छिटो र छरितोसँग मद्दत गर्न सकुँ र हाम्रो चालचलन, रीतिरिवाज र भेषभूषा जोगाउनुको लागि खोलिएको समाज हो । पुन समाज युके बालियो हुनु भनेको मगर संघ युके बलियो हुनु हो ।
के भविष्यमा पुन समाज युके र पुन मगर समाज युके एकीकृत हुने संभावना देख्नु भएको छ ? यदि छ भने आधारहरु बुँदागत रुपमा बताइदिनु हुन्छ कि ?
अवश्यै नै एक दिन यी दुई सामाजिक संस्था एक हुने छ । हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नो सोचाई बानीव्यहोरा र विचार हुन्छन् । मेरो विचारमा यी तलका बुँदाहरुलाई आधार मानेर हिँडेमा एकीकृत हुने संभावना छ ।
इतिहासलाई सँधै कदर गर्नुपर्छ, बिर्सनु हुँदैन,
सत्य कहिले झुठो हुँदैन
सधैं सही मार्गमा हिँड्न सक्नु पर्छ ।
संसारभरि छरिएर बसेको मगर तथा गैरमगरहरुलाई केही सन्देश छ कि ?
सबैभन्दा पहिला ढिलो भए तापनि नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । एकापसमा माया, कदर, मेलमिलाप गरौं यही नै मेरो सन्देश छ । यसरी एभरेष्ट टाइम्समार्फत कुराकानी गर्ने मौका दिनु भएकोमा पत्रिकाका टिम र दुत भाइलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ ।